Thread: [mm]puFmylrS jrefrmowif;rsm; (4)[/mm]
12-15-2012 03:27 PM #11
Noble Contributor Godly Cupid Cool, huh?
Thanked 30,745 Times in 2,516 Posts
Originally Posted by r-kar
Hi Pinyat ,, thanks..but is there any specific link to get the Q number or something?
Q eHygwfu a[m'Dvifh rSm,lvdk h&ygw,f/
Life is an amazing gift to those who have overcome great obstacles, and attitude is everything!
Chit.tat.lun.tu, Incubuz, kokoye, Lynn Eainthu, MNO.BN, ngatetpyar, r-kar, shadow69, THIHA
12-26-2012 02:16 PM #12
Thanked 2,057 Times in 139 Posts
ဒီည Boxing Day ဘောလုံးပွဲတွေ အားပါးတရ အားပေးမယ် ဆိုကာမှ Mio TV က Signal lost ဖြစ်နေတယ်ဗျာ.. ၁၆၈၈ ကိုလည်း ဖုန်းခေါ်ပြီးဘီ။ မနက်ဖြန်ကြမှ Technician လွှတ်လိုက်မယ်တဲ့။
အဲဒါ ကျွှန်တော့် တအိမ်တည်းဖြစ်တာလား?
ကျူးပစ်ကြီးထဲက မီယို ( Mio TV) line ယူထားတဲ့ ဘော်ဘော် တို့ ရော ဖြစ်တာလား လို့ အဖေါ် လာစပ်တာပါ။
အရင် Fiber ယူထားတုန်းက အဲလို မဖြစ်ဘူးပါဘူး.. အခုနေရာက Fiber မရှိ လို့ တယ်လီဖုန်းလိုင်းကနေ ယူထားလို့များဖြစ်တာလားလို့ပါ။
Chit.tat.lun.tu, hellocatcat, Incubuz, kokoye, MNO.BN, shadow69, softsin, zepeian
01-02-2013 03:25 PM #13
ဘရူနိုင်းကို Singaporeကနေ machine တခု(around 6kg to 7kg) ပို့ချင်လို့....
ဘယ်ကနေပို့ရင် ဈေးသက်သာပြီး အဆင်ပြေမလဲစိုတာ အကြံဉာဏ်လေး ပေးကြပါအုန်းနော်....
Chit.tat.lun.tu, Incubuz, kokoye, MNO.BN, shadow69, zepeian
01-03-2013 07:16 AM #14
မနေ.က စီးတီးဟော ရောက်လို. တွေ.လိုက်တာလေး ပါ၊ singapore airways က ပရိုမိုးရှင်းလေးတွေ.လိုက်တယ် ၊
S$ 345 တဲ.၊ ကီလို 40 ရမယ်ဆိုလားပဲ.. ၊ စ်ိတ်ဝင်စားသူများ အတွက်ပေါ့ ။
changralong, Chit.tat.lun.tu, Incubuz, kokoye, MNO.BN, mrlynn, shadow69, softsin, zepeian
01-03-2013 07:20 AM #15
Chinese New Year umvawmh [kwfr,f rxif....
changralong, Chit.tat.lun.tu, devilgrin89, Incubuz, kokoye, mgknow, MNO.BN, mrlynn, Oscar Htun, shadow69, zepeian
01-03-2013 08:13 AM #16
Thanked 1,174 Times in 84 Posts
Originally Posted by softsin
ဒါလေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။Facebook ကနေကူးလာတာ။ 06 Feb 2013 ticket ရသေးလားမေးကြည့်တာ
''ပလိုမိုးရှင်းတစ်ကက်တွေက ကုန်သွားပါပြီရှင့်။ ပုံမှန်တစ်ကက်( $670)တန်တွေတော့ရှိပါတယ်ရှင့်'' တဲ့။ခွိ
SINGAPORE AIRLINES PROMOTION FOR 40 KGS, (MINIMUM STAY IN YANGON7DAYS )
Sin ~ Rgn ~ Sin ( 30 DAYS TICKET )
YOU CAN BUY FROM : Now to 01 Feb 2013
YOU CAN TRAVEL : 07 Jan 2013 to 28 Feb 2013
YOU CANNOT TRAVEL : 07,08,09,10 Feb 2013.
TICKET PRICE : S$ 345
*** TICKET MUST BE ISSUED WITHIN " 24 hours " AFTER RESERVATION ARE MADE. ***
*** AFTER ISSUED : NO REFUND , NO CHANGES ARE ALLOWED.
CALL US @ 6337 7282 , 6337 7558 .
Team Hi Travel
badinf, changralong, Chit.tat.lun.tu, devilgrin89, Incubuz, jsn_woo, kokoye, mgknow, MNO.BN, mrlynn, Oscar Htun, shadow69, zepeian
01-03-2013 08:41 AM #17
လက်ရှိ ပီအာ တင်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ပီအာ ဖောင်ဖြည့်တဲ့ပုံစံ နမူနာလေးများ မျှလို့ရမလား ခင်ဗျာ.. ဖြည့်ရမယ့် တစ်ချို့ဟာတွေက သိပ်နားမလည်လို့ပါ.. မိန်းမအတွက်ပါ.. ဖြည်ချင်တာပါ... ပီအာဖောင်လေးကို ဝေမျှလို့ရမယ်ဆိုရင် PM လေးနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ဒိအတိုင်းဖြစ်ဖြစ် ရှယ်ပါလား ...
အ၇င်ကတော့ မိန်းမက ကျောင်းတတ်တာ.. ကျောင်းလဲပြိးကော ကလေးလည်းတန်းရတော့ အလုပ်တောင် မလုပ်ဖြစ်ပဲ.. အခု ရန်ကုန်ပြန်ပြိး မွေးဖွားဖို့ လုပ်နေပါတယ်။ ဖောင်ဖြည့်တဲ့အချိန် မိန်းမအတွက် fin နံပါတ်တွေ ထည့်ဖို့ လိုပါသလား.. ကျောင်းတတ်တုန်းက FIN နံပါတ်တော့ ရှိပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ပတ်စပို့နံပါတ်ပဲ ထည့်သုံးရမလား ....
နောက်တစ်ခုက အိမ်ထောင်စုစာရင်းက မိန်းမနဲ့ ယောင်္ကျား အတူတူဟာ မရှိသေးဘူး ဖြစ်တယ်. သူအိမ်နဲ့ သူ.. ကိုယ်အိမ်နဲ့ ကိုယ် ဖြစ်နေပါတယ်။ ယူပြိးကတည်းက ရန်ကုန် မပြန်ဖြစ်သေးတော့. အိမ်ထောင်စုစာရင်း ၂ ယောက် မပေါင်းစည်းရသေးပါဘူး. အဲဒါကော အဆင်ပြေပါ့မလား...း) တရုတ်နှစ်ကူးပြိးနောက် ပီအာတင်မယ်။ ပြိးရင် ရန်ကုန်ကို မိန်းမကလေးမွေးမှ အလည်ပြန်ရင်း အိမ်ထောင်စုစာရင်းကို လုပ်မလား စဉ်းစားထားပါတယ်။
နောက် Form 4A က စာမျက်နာ ၇ က ကုမဏီရဲ့ ထောက်ခံချက်လား.. စလုံးတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ထောက်ခံချက်လား ခင်ဗျာ.. အဲဒါလေးလည်း နားမလည်ဘူး ဖြစ်နေတယ်...
ဆောင်ရန်ေ၇ှာင်ရန်လေးတွေ ဝေမျှကျပါအုန်းနော်..း) အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်လျှက်ပါ...
changralong, Chit.tat.lun.tu, devilgrin89, kokoye, Min Nanda, MNO.BN, mrlynn, shadow69
01-03-2013 01:22 PM #18
Thanked 532 Times in 46 Posts
စင်ကာပူရှိမြန်မာသံရုံးကို passport စာအုပ်လဲ၊အတွက်သွားရင်အစီအစဉ်တွေကပြောင်းနေပါပြီ၊ Online Q နံပတ်ကိုယူပြီး၊သံရုံးရောက်ပါက ကောင်တာ ( ၇ )ကိုအရင်သွားပါ၊အခွန်ကိစ္စ၊သက်တမ်းတိုးကိစ္စတို့ အတွက်စာရွက်စာတမ်းများကိုစစ်ပါတယ်၊ ( online Q နံပါတ်နဲ့ မခေါ်ပါ၊အရင်ရောက်အရင်တန်းစီပါ )၊ပြီးရင်ဓါတ်ပုံရိုက်၊လက်ဗွေနှိပ်၊လက်မှတ်ထိုးပြီး၊ ညနေ ၅ မှာစာအုပ်ပြန်လာယူဖို့စာရွက်လေးတရွက်ပေးပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာပြန်စောင့်ရပါတယ် ၊အဲဒီမှ Online Q နံပါတ်အတိုင်းခေါ်တဲ့ကောင်တာသွားပြီး အခွန်ဆောင်၊စာရွက်စာတမ်းပြပြီး အခွန်ဆောင်ရမဲ့သူများအတွက်ငွေတွက်ပေးပြီး၊နေလည် ၃ နာရီမှာကျသင့်ငွေဆောင်ဖို့ စာရွက်တရွက်ပေးပါတယ်။အခုစာအုပ်အသစ်လဲတာကိုတရက်ထည်းအ ပြီးလုပ်ပေးနေပါတယ်။အရင်လို Online Q ခေါ်စောင့်နေရင်၊နောက်ကျလို့ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာမှာအကြာကြီးစောင့်ရပါတယ်။T
badinf, changralong, Chit.tat.lun.tu, christine, CupidBoyz, cyborgc4, devilgrin89, Jim, jsn_woo, ka hta ma, KaungKinPyar, kokoye, legwa, Lynn Eainthu, MaungHtwe, mg pyin, mgknow, MNO.BN, mrlynn, Nenemosha, ngatetpyar, Oscar Htun, rosyster, shadow69, solidsnake, SuperPooh, sweetee, turtle81
01-31-2013 07:52 AM #19
'Dvdkowif;rsdK;awG w&ufawmh wufvmr,fvdkYxifxm;ygw,f/
bD,mawG t&ufawG eif;uefaomufNyD; um;vrf;udk rD;eDrD;pdrf;rMunfhyJul;wJhtNzpfrsdK;yg/
olrsm;EkdifiHrSm tvkyfvmvkyf&if;'grsdK;Nzpfwmuawmh &ifeifhp&mygyJAsm/
yifeDplvmyvmZm em;rSm NzpfoGm;wm/ wdkufoGm;wJhae&mu yefeDplvmeJY zleefMum;u vrf;xifw,f/
ul;wmuawmh uGsefawmfwdkYvnf;wcgwavul;wmygyJ/ 'gayr,fh rl;ae&ifawmhowdxm;ayghAsm/
toufudk OmPfapmifhwJh/ wu,fom rD;eDaew,fqdk&ifawmh um;orm; rSm trSm;r&Sdygbl;/
udk,fhNrefrmvlrsdK;awG olrsm;EkdifiHrSm ab;&efuif;a0;Muygap/
badinf, barronbala, batoe, Chit.tat.lun.tu, devilgrin89, gigabyte, hellocatcat, HlaingKaLayThin, Incubuz, jsn_woo, kokokhantchaw, mgknow, MNO.BN, ngatetpyar, pieces, Ravan, shadow69, softsin, solidsnake, talkyboy, tharpu, Thura Soe, tiptop, zzz
01-31-2013 08:17 AM #20
toufudk OmPfapmifhwJh/ wu,fom rD;eDaew,fqdk&ifawmh um;orm; rSm trSm;r&Sdygbl;
[kwfw,fAs .. owdxm;rS&rSm/ rD;eDjzwfavSsmufwmawmh jzwfavSsmufoltrSm;As/ 'gayr,fh '&dkifbmu xdef;vdkYr&awmhbl;qdkwmawmh bk&m;ociftodqHk;jzpfrSmyJ/
puFmylu wpfcsdKU'&dkifbmawG[m arSsmfvifhrxm;&avmufatmif ,kwfwmawG&dSw,f/ Oyrm .. eDaewmudk jay walk vkyfwmudk awGY&if t&dSefwifNyD; wdkufypfzdkYBudK;pm;wmrsdK;/
rSwfrSwf&& wpfaeYrSm aeYvnfxrif;pm;NyD; &Hk;jyefvmawmh vrf;ul;&w,f .. vrf;rSm rsOf;Mum;r&dSbl;/ 'DvdkeJY usaemfwdkYawG ul;Mua&m .. ul;Mua&mqdk&rSm ESpfzufum; awmfawmf&Sif;NyD; tcsdefvHkavmufrSul;aeMuAs/
'Dvdk ul;wJhtcsdefrSm wpfzuf,mOfaMumu ppfpdrf;a&mifavmf&DwpfpD;vmwm awmfawmfBuD;vSrf;w,f/
tJh'gudkAsm .. usaemfwdkY qDbufudk acgif;wnfNyD; AsL;AsJqdkvdkufvmwm udk,fuaemufqHk;uaumifqdkawmh .. '&dkifbmudkvSrf;Munfhwm .. pdwfrlrrSefaeyHkyJ .. avmf&D[m &Hk;*dwfayguf0us,ftxd qdkufcsvmNyD; vrf;rbufudk jyefyufxGufoGm;wm/ tmvm;vm; .. awmfawmfvnf;zkoGm;w,f/
aocsmwmu jrefrmjynfrSm roum wdkuf&ifomwdkufrdr,f vrf;ul;wJholjrifvdkY t&dSefudkwifNyD;wdkufzdkYtm;xkwf&avmufatmif r,kwfrmMuovdkyJAs/ xifwmajymwmyg/
barronbala, batoe, Chit.tat.lun.tu, devilgrin89, Grace, HlaingKaLayThin, KM Wai, kokokhantchaw, LU SHAY, mgknow, mgmgkyaw, MNO.BN, ngatetpyar, pieces, shadow69, softsin, tharpu, The villain, thidar, Thura Soe, tiptop, zzz